News - Nkịta na-ehi ụra ọnọdụ
Onye ọ bụla nwe anụ ụlọ chọrọ ịmatakwu banyere nkịta ha, banyere ọnọdụ ụra ha kachasị amasị nkịta ha. Ọnọdụ nkịta na-ehi ụra, na oge ha na-ehi ụra nwere ike ikpughe ọtụtụ ihe banyere mmetụta ha.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ ihi ụra nkịtị na ihe ha nwere ike ịpụta.
Ọ bụrụ na ị na-ahụkarị nkịta gị ka ọ na-ehi ụra n'ọnọdụ ụra a. Nke a pụtara na ha nwere ahụ iru ala ma nwee ntụkwasị obi na gburugburu ha. Nkịta ndị ahụ na-enwekarị obi ụtọ, nweere onwe ha, ma na-eguzosi ike n'ihe. Ọnọdụ a na-ahapụkwa akụkụ ahụ ha ka ha nwee ike ịkwaga mgbe ha na-ehi ụra, n'ihi ya ị nwere ike ịhụkwu ntighari na ụkwụ na nkịta nke dina n'akụkụ ha.
Oge mgbụsị akwụkwọ a bụkarị ihe a na-ahụkarị. N’oge mgbụsị akwụkwọ na n’oge ọkọchị mgbe ihu igwe dị jụụ, nkịta na-ehi ụra n’ụzọ dị otú a, iji nyere aka chekwaa okpomọkụ.
Na-agbasapụ na Tummy
Nkịta na-ehi ụra n'ọnọdụ a, na-agbatị aka ya na ụkwụ ya na afọ, na-abụkarị ihe ngosi nke ezigbo agwa. Ha na-ejupụta mgbe niile na ume, dị mfe ịgba ume, na obi ụtọ. Ọ bụ ọnọdụ ịhọrọ maka ụmụ aka na-arahụ ụra mgbe ha na-egwu egwu ma chọọ ịchọ ịgbada ebe ha kwụ.
Na Azụ, Paws Up Na Ikuku
Ihi ụra na afọ ekpughere ekpughere na-enyere nkịta aka jụụ dị ka ịgbagharị na bọl nwere ike ichekwa okpomọkụ. Igosipụta mpaghara ndị a bụ ụzọ dị mma iji merie okpomoku ahụ n'ihi na ajị ahụ dị gịrịgịrị karịa afọ ma aka ụkwụ na-ejide glands.
Ọ bụkwa ọnọdụ nke na-egosi nkịta nwere ezigbo ntụsara ahụ, na-ahapụ ebe ndị kachasị emetụ n'ahụ ha na-esiri ike ma ọ ga-esi ike ịbanye n'ụkwụ ha ngwa ngwa. Ọnọdụ ihi ụra a na-adịkarị n'oge ọnwa okpomọkụ.
Maka nkịta ndị ahụ na-ahọrọ ihi ụra na ndị nwe ha, ọ ka dị mma mgbe niile ka ọ dị ọcha, kpoo, saa ahụ ma gbaa ọgwụ mgbochi.